Etone @ ငထုံရဲ့ ရင်နာဖွယ်ရာ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်သနှစ်များ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Etone @ ငထုံရဲ့ ရင်နာဖွယ်ရာ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်သနှစ်များ
Etone @ ငထုံရဲ့ ရင်နာဖွယ်ရာ ကိုယ်တွေ့ အဖြစ်သနှစ်များ
Posted by etone on Oct 1, 2012 in Aha! Jokes, Satire, My Dear Diary | 49 comments
etone ဘ၀ တစိတ္တပိုင္း အမွတ္သည္းေျခ လံုး၀ မခ်ိ .. ခိြခိြ
ငထုံတဲ့ …..ငထုံ ဆိုတာ တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး …. မနေ့ကမှ သစ်စက်စက် ကင်ပွန်းတပ်လိုက်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ နာမည်သစ်လေးပါပဲ ။ တစ်မိသားစုလုံးကလည်း ၊ နာမည် အသစ်ပေါ် အကြွင်းမဲ့ ထောက်ခံလိုက်ကြပါတယ် ။ ထိုက်တန်တဲ့ နာမည်လို့လည်း ဆိုကြသတဲ့ မိအေးကဖြင့် နှစ်ခါပဲ နာပါတယ် … ကျွန်မကတော့ အကြိမ်ကြိမ်ကိုနာတာတောင် အမှတ်မရှိလို့နောက်နောင် အမှတ်သည်းခြေရှိသွားအောင် နာမည်ပါပြောင်းလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်ပါ ။ အကြိမ်ကြိမ်နာတယ်ဆိုတာ အသည်းနာတယ် ၊ (ရင်ခံတယ်၊ နင်တယ်) ရင်နာတယ် ၊ စိတ်နာတယ်ဆိုတာကို ရည်ညွှန်းပါတယ် ။ :hee:
ကံစမ်းမဲ ၊ ဒစ်စကောင့်တွေအတော်များများ မက်လုံးပေးတဲ့နောက်ကို ယောင်လိုက်ရင်း ၊ အမြဲတမ်း မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက်မကိုက်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်တွေကြောင့် ၊ အကြိမ်ကြိမ် နင်ခဲ့ရဖူးပါတယ် ။ ကံစမ်းမဲတွေ ၊ ဒစ်စကောင့်တွေက မက်လုံးပေးထားမှန်း သိလျှက်နဲ့ ၊ သမိုင်းပေးတာဝန်လို မဝယ်ရ မနေနိုင်တာ ၊ ကျွန်မရဲ့ မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ရူးသွပ်မှုအကျင့်ဆိုးပါပဲ ။ ရင်ခံပြီး ခဏလောက်သာ အမှတ်ရနေတတ်ပြီး ဆင်ခြင်တတ်ပေမယ့် ၊ နောက်ပိုင်း မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ရှိတဲ့အခါ အလားတူရင်ခံစရာ ကိစ္စမျိုးထပ်လုပ်ပြီး ကံစမ်းမဲတွေ ၊ ဒစ်စကောင့်တွေနောက်လိုက်မိပြန်တာပါပဲ ။
မနေ ့ကလည်း တနင်္ဂနွေဖြစ်တာကြောင့် နေမြင့်တဲ့အထိ အိပ်မယ် စိတ်ကူးထားပေမယ့် ပုံမှန်ရုံးတက်ချိန်အတိုင်း စောနိုးနေတာကြောင့် ပြန်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားရပါတယ် ။ လှိမ့်ပိန် ့အိပ်ပေမယ့် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်တာကြောင့် ၊ အင်တာနက်ဖွင့်ပြီး ဒါဇင်ပလက်စ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နောက်ပြောင်ရင်းချက်တင်ခဏ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ သူတို့လည်း တနင်္ဂနွေနားရက်မို့ လမ်းကြောင်းဆင်းတဲ့ လူက ဆင်း ၊ စနေက သောက်လို့ မူးတဲ့လူကလည်း မူး ၊ အိမ်အလုပ်လုပ်စရာရှိတဲ့ လူက လုပ် ၊ မိန်းမကြောက်လို့ အွန်လိုင်း မတက်ရဲတဲ့ လူကလည်း ရှိဆိုတာနဲ့ ခဏဝင်သုံးပြီး ပျောက်သွားကြတယ် ။ ဒါနဲ့ပဲ တစ်ယောက်တည်း ပျင်းပျင်းနဲ့ အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာပြီး အပြင်ထွက်ဖို့ ကြံစည်မိပါတယ် ။ သွားတိုက် ၊ မျက်နှာသစ်ပြီး ကြောင်ချီးရုပ်နဲ ့ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အကျီ င်္တစ်ထည်ကောက်စွပ်လို့ လမ်းသလားခြင်းအမှုကို ပြုမိပါတော့တယ် ။
အမေ့ဟန်းဆက်လည်း လဲဖို့ လိုနေတာကြောင့် ဟန်းဆက်အသစ် ဘာထပ်ထွက်လဲ သိချင်တာနဲ့ ဝယ်နေကြ သိမ်ဖြူလမ်းက ဟန်းဆက်ဆိုင်ထဲ ခဏမွှေခဲ့ပါတယ် ။ မွှေသာမွှေခဲ့တာ မဝယ်ခဲ့ပါဘူး ။ (ဝယ်လိုက်လျှင်နောက်တစ်ခါ အပြင်ထွက်ဖို့ အကြောင်းပြချက် မရှိတော့မှာ စိုးလို့ပါ ) ။ ဖုန်းရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကနေ ခြေဦးတည့်ရာ လျှောက်လိုက်တာ ၊ ဘိုကလေးဈေးနားက ဂမုန်းပွင့်ကို ရောက်သွားပါတော့တယ် ။ ပရိုမိုးရှင်း ဧရိယာမှာ အဝတ်တွေရောင်းနေတာ ၊ အလုယှက်ဝယ်နေကြပုံများ အလကားပေးသလားတောင်ထင်ရပါတယ် ။ ဒီလိုဆိုတော့လည်း နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ မဆင်းရဲကြဘူးပဲ ။ တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်နဲ့ တယောက်တည်း လေလွင့်ရာက ဖလားထဲမှာ မဲလိတ်လေးတွေထည့်ထားတာတွေ့လို့ စပ်စုမိတော့ ၊ ကံစမ်းမဲ ပေးတာပါတဲ့လေ ။ သုံးသောင်းဖိုးဝယ်လျှင် ကံစမ်းမဲ တစ်ခါ နှိုက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး ဗလာမပါဘူးတဲ့လေ ။ ဒီကြားထဲ အဝတ်ထည်နဲ့ အသုံးဆောင် ပစ္စည်းတွေကို ဂမုန်းပွင့်ရဲ့ ၁ရ နှစ်ပြည့် နှစ်ပတ်လည်မို့ ၁၇% ဒစ်စကောင့်အနေနဲ့ လျော့ပေးပါသတဲ့ ။ ကျွန်မဝါသနာပါတဲ့ ဒစ်စကောင့်နဲ့ ကံစမ်းမဲစကားလုံးတွေကြား စီးမျောသွားမိတယ် ။ ကိုယ့်ရှေ့မှာတင် ကံစမ်းမဲ နှိုက်သွားတဲ့ လူတွေက ပစ္စည်းကြီးကြီးတွေရကြတာမြင်တော့ ၊ ရင်ခံခဲ့ရတာ မေ့ပြီး သုံးသောင်းဖိုးမပြည့်ပြည့်အောင် လိုက်ဝယ်မိပါတော့ရတယ် ။ တကယ်မလိုတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို မျက်စိကို အစာကျွေးရင်းလိုက်ဝယ်မိတာ သုံးသောင်းတောင် ကျော်သွားပြန်တယ် ။
ဒါတွေမြင်တိုင်း… တောက်တုံးမကျတဲ့ ငထုံကိုပဲ အပြစ်တင်မိတော့တယ် ။
17% ဒစ်စကောင့်မက်လို့ ၊ ညစာရော မနက်စာပါ ငတ်သေး .. မုန်းချရာဟယ် ။
ဒါနဲ့ပဲ စာမေးပွဲမှာ အဆင့်တစ်ရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်လို ပြုံးဖြီးဖြီး မှိုရတော့မယ့် မျက်နှာကြီးနဲ့ ၊ ရပို့ကဒ်ကြီးကိုင် …. အဲအဲ …. ပစ္စည်းဝယ်ထားတဲ့ ဘေလ်လေးတွေကို ကိုင်ပြီး ကံစမ်းမဲ နှိုက်ဖို့ ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။ ဂျာနယ်တွေ ပရိုမိုးရှင်းပွဲတွေမှာ ၊ ဆလက်ဘရက်တီတွေ ကံစမ်းမဲနှိုက်တဲ့ ပုံစံနဲ့ လက်လေးနှစ်ချောင်းကို ရွရွလေးပူးပြီး ငွေဖလားထဲက မဲတစ်လိတ်ကို နှိုက်လိုက်ပါတယ် ။ လက်ထဲပါလာတဲ့ မဲလိတ်လေးကိုလည်း F4မင်းသားလေးကပေးလိုက်တဲ့ ရည်းစားစာလိုပဲ ၊ ပါးစပ်နားရွက်တက်ချိတ်မတတ် ပြုံးပြီး ဖွင့်ကြည့်မိလိုက်တဲ့အခါ ၊ ဖွင့်ရခက်တဲ့ ငါးသေတ္တာဗူးကြီး တစ်ဗူးများတောင် ပေါက်ပါသတဲ့တော် ။ ဒါနဲ့ပဲ အစမ်းနှိုက်တာ ၊ ဒါမယူတော့ဘူး နောက်တစ်ခါ ထပ်နှိုက်မယ်ဆိုပြီး ၊ အသံထက်မြန်တဲ့လက်နဲ့ ဖလားထဲက မဲလိတ်တွေ ဓါးပြတိုက်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ၊ ခါးပိုက်နှိုက်လက်ထက်မြန်တဲ့ ဖလားကိုင်ထားသူကောင်မလေးက ခက်သွက်သွက်ပဲ အကွက်ရွေ့လို့ ဖလားပျောက်သွားပါပြီ ။ ဒါနဲ့ပဲ ဘူပိတ်ပိတ်နဲ့ ၊ ရတာလေးယူပြီး ထမင်းခုနှစ်ရက်မစားရသလိုခြေလှမ်းတွေနဲ့ အိမ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် ။
အရင်ကဆို ဆပ်စလူး နတ်ပူးသလို ၊ အော်ဟစ် ခုန်ပေါက်ပြီး အိမ်ထဲ ဝင်နေကြ ၊ ဒီနေ့မှ ဖဲအချီကြီးရှုံးတဲ့ နတ်ကတော်မျက်နှာနဲ့ မသာမယာဝင်လာတာကြောင့် အမေက ဘာဖြစ်ခဲ့သလဲ ပြာပြာသလဲ လိုက်မေးပါတော့တယ် ။ အဖြစ်မှန်ကိုလည်းပြောပြရော ၊ ငတုံးလို့ တခွန်းပြောရင်း နဂါးမျက်စောင်းကြီးပစ်လို့ အိမ်ထဲဝင်သွားပါရောလေ ။ အဲ့ဒီနေ့က အိမ်မှာ ညနေစာ မစားရပါဘူး အမေ့ရာဇသံကြောင့်ပါ ။ ဦးနှောက်မရှိပဲ သုံးသောင်းကျော်ဖြုန်းရင်း ရလာတဲ့ ငါးသေတ္တာပဲစားလို့ တချက်လွှတ် အမိန် ့ထုတ်ထားတာကြောင့် ၊ အိမ်သားတွေ ထမင်းစားနေချိန် ၊ ပိုက်ဆံအိတ်လေးယူပြီး ငတက်ပြားခြေနင်းသလို ခပ်ဖွဖွနင်းရင်း တံခါးအပေါက်ဝရောက်မှ ဒံပေါက်သွားစားပြီဗျို ့လို့ အော်ဟစ် ဆင်းပြေးလိုက်တာ ၊ ဒံပေါက်ဆိုင်တော့မရောက်ဘူး ၊ ညဆယ်နာရီထိုးမှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ် ……. ။ ဖြုန်းခနဲ ငုတ်တုတ်ကြီး ထိုင်နေတဲ့ အမေ့ကိုလည်း တွေ့ရော ၊ ကြိုမတွေးထားပါလျှက် ပြောလိုက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်က … ဘာစားရမှန်း မသိလို့ ဆိုင်ပတ်ရှာနေလို့ပါ တဲ့လေ ။ အလျှောက်ကောင်းလို့ အထောင်းသက်သာသွားတယ်ထင်ပါရဲ့ ဘာစကားမှပြန်မပြောပေမယ့် ….. ပြသဒါးနေ့မို့ ညစာငတ်ရုံတင်မကဘူး ၊ ဒီနေ့မနက်စာ breakfast လည်း ငတ်ရော ။ ။
ဒါဂျီးကို ညစာအဖြစ်စားရမယ်တဲ့ … ဟွန့် … ဗူးဖောက်ဖို့ကလည်း မလွယ် ၊ ကြိုက်လည်းမ ကြိုက်နဲ့ … မာမီ ရက်ချက်ဒယ် ….. တော်ဘီ အိမ်ပေါ်ကဆင်းပြီး ယောက္ခမအိမ်တွား ချားမယ် ။ ဒါနဲ့ … ယောက္ခမလောင်းလျာတွေ များနေလို့ အဒူ့ကို ရွေးရမယဲ … ခွိခွိ ။
( အဟီး … ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး .. ဝေဒနာကို ကြေငြာလိုက်ရမှ ရင်ထဲ ပေါ့သွားသလိုပဲ … အားလည်းနာပါတယ် .. ခင်လည်းခင်ပါတယ် … သူများတွေ အတည်တံ့ရေးနေတဲ့ ရွာထဲ … ပဲကြီးလှော်စားရင်း … လေဘေးထည်လာရောင်းသလိုလုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက် .. မှားတာချိယင် ဝံဒါမိပါ အရပ်ကတို့ ရယ် … ခွိခွိ ။ )
ယနေ့မှစ နောက်ကမာ္ဘတိုင်အောင် ပေါဦးမည့် …
p.s// ရယ်တာ ခွင့်လွှတ်ပါတယ် ၊ လှောင်တာ ခွင့်မလွှတ်ပါ ။ ခွိခွိ ။ အမှတ်မချိတဲ့ ငထုံ အကြောင်း အရင်ကလည်း နည်းနည်း တို့ခဲ့ဖူးပါတယ် …. ဘယ်လောက်တောင် အမှတ်မချိယဲ တိချင်ရင်ဒေါ့ … အောက်ကလင့်လေးမှာဖတ်ကြည့်ပေါ့နော် ။
မိထုံ မိထုံ ငါးတစ်တာလိုချင်တာများ ၃သောင်းပေးဝယ်ရသလားအေ။
ညီးနဲ့တော့ခက်ပါတယ်။ နောက်တခေါက်ပြန်လာပေါအုံးမယ် အထု မမအလုပ်ရှုပ်နေလို့ :harr:
မမရယ် … တမီးကို .. တပတ်လောက် အိမ်ပေါ်တင်ကျွေးထားပါလား ဟင်င်င် ….
အိမ်မှာ အခြေနေမကောင်းဘူး …. ဒီနေ့ ညစာပါ ငတ်လောက်တယ် … ခွိခွိ
ဂမုန်းပွင့် စင်တာမှာ ကံစမ်းမဲပေါက်တဲ့လူ တွေ့ဖူးပြီဗျို့။
ဖစ်ရလေ ထုံလေးရယ်…… အဲ တုန်လေးရယ်…
မ တော့ မြေနီကုန်း က ဂမုန်းပွင့်မှာ အဲလို ကြုံခဲ့ဘူးတာ နှစ်ခိရှာပေါ့…
ငထုံ စီနီယာ (မွန်ကစ်)
ညဆယ်နာရီထိုးမှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ် ……
အိုက် ငါးသေတ္တာလေးကို ရအောင်ဖွင့်ပြီး
ပေါင်မုန့် ကြားညှပ်လို့ အသီးအရွက်လေးနဲ့များ
Sweet Toothရေ .. ကြံဖန်ပြီး ဂုဏ်ယူရလျှင် …. သူတို့ ပေးတဲ့ ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲ ရအောင် ယူခဲ့တာ သက်စေ့ နီးပါးရှိပြီ … ဟီး
အစ်မ Mon Kit ရေ …. ပြန်တွေးလေတိုင်း .. အော်ငိုချင်ပါတယ် … အမှတ်မရှိတဲ့ ဒီဦးနှောက် … ဟီး
တရာ့တကြိမ်မြောက် ချစ်ခွင့်ပန်ခြင်းတောင် ရှိသေးတာပဲ .. အဟဲ … ညီမက .. 101ကြိမ်တောင် မပြည့်သေးဘူး .. ဟီး ဟီး :harr: အဲ့လိုပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြံဖန်အားပေးရပါတော့တယ် …
အန်တီအိရေ … ဆင်းသွားကတည်းက ဒံပေါက်ဆိုင်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူး … ။ မြင်းစောင်းက လွှတ်တဲ့ မြင်းလို့ ….. လွတ်ပြီ ကျွတ်ပြီဆိုပြီး လစ်သွားတာ … ဟီး
လက်ကြောက မတင်းတော့လေ … အခုအချိန်ထိ ၊ ငါးသေတ္တာဗူးတို့ ၊ နို့ဆီဗူးတို့ မဖောက်တတ်သေးဘူး … ဖောက်တာနဲ့ ဗူးပါ မှောက်တာပဲ ..
ဒေါ်အိထုံ..အဲ အဲ ဒေါ်အိတုန်က
ကံစမ်းမဲအကြောင်း ပြောသလိုနဲ့ ကပ်ကြွားသွားတာ
၃၃- ၂၄- ၃၆- ၃၈ တဲ့
ဒေါက်တာဆရာမကြီးကတော့ စာရေးကောင်းသူပီပီ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို
ဒစ်စကောင့်တွေ မဲဖောက်တာတွေကို ရေးပြတာ လောဘသား ကိုရင်စည်လည်း
ဘီယာကံစမ်းမဲ အရက်ကံစမ်းမဲနဲ့ ဘီယာပလိုမိုးရှင်း ကောင်မလေးတွေကို
ငမ်းပီး မိုက်မှားမိခဲ့ဒါတွေကို နောင်ကြဉ်သွားပါဒယ်… ဒေါက်တာဆြာမကြီး ခင်ည..
ဒါနဲ့ အကျီအပြာအောက်က ချိတ်ကြီးနဲ့ ဘာများလဲခင်ည…
ငါးသစ်တာဖောက်သံမရှိရင် အဲ့ဒီဘူးကို ခြေဖဝါးနှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး
အပေါ်ကနေ ဓါးချွန်နဲ့ ဝိုက်ဝိုက်ပီး ဖိရို်က်ချပီး ဖောက်လို့ရပါတယ်..
ညက်မှန်အဖြူက အကြီးကြီးပဲ နော်
ခိ ခိ ခိ ခစ် ခစ် ခစ် ….
ကိုရွာစားကျော် …နံပါတ်တွေနဲ့ အထူးကျွမ်းကျင်ပုံရတယ် … ဗေဒင်ဟောစားပါလားဟင် …. ဟီး ဂဏန်းတွေပေးနေတယ်ဟေ့ … ဝါသနာပါလျှင်တို့ထားကြပါ ….. မနက်ဖြန်အတွက်တဲ့ … ခွိခွိ ။
ကရင်စီရေ … အဟောင်းတွေ အသစ်ဖြစ်အောင် ပြန်ပြောမိသလိုဖြစ်ပြီး ကရင်စီ အသည်းတွေ လှုပ်ခတ်သွားတယ်ဆိုလျှင် ဆောရီးပါချင့် …. ၊ နီကီတာကလည်း ပြန်လာလျှင် ကြိုမလို ငရုတ်ကျည်ပွေ့သွေးထားပါတယ်တဲ့လေ … ဟီးဟီး ။ အကျီ င်္အပြာဟုတ်ဘူး .. အဲ့ဒါ ဘောင်းဘီအပြာ ..အောက်ကတော့ .. ရွာထဲက ဟို လွှတ်တော်တက်တဲ့ လူဂျီး ခဏခဏငှားနေတဲ့ ဥစ္စာ ၊ နောက်တခါဆုံရင် လက်ဆောင်ပေးမလို့ .. မှတ်မှတ်ရရဝယ်လာတာ ။ ငါးသေတ္တာဖောက်တဲ့ နည်းကလည်း .. အလန်းပါပဲ ..စားချင်စရာကို မရှိတော့ဘူး .. ခြေထောက်ကြီးနဲ့ နင်းလို့ ….. ဂွိဂွိ …
မောင်ကင်းရယ် .. နာ့ဖြင့် အဒူယဲလို့ … မနည်း ပြန်လိုက်ရှာရတယ် … ခွိခွိ ။
အဲ့ညက်ညန်က … တစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုပေးဖို့အတွက် သီးသန့်ဝယ်လာတာ …. သူ့ခမျာ ညက်ညန် အကြည်ကြီးနဲ့မို့ လွှတ်တော်မတက်ရတာ .. သနားချရာဟယ် … ဒါကြောင့် အချူရောင်ယေးကျောက်လေးတွေနဲ့ … တူ့အတွက်ဝယ်ရာဒါ ..
မအိတုံ အမေကိုတော့ သနားမိပါရဲ့ သူခဗျာ လက်ရှိဟန်းဆက်လေးနဲ့ ဘယ်အချိန်ထိများ နှစ်ပါးသွား
အစ်မ… စိတ်နာနာနဲ့ အဲ့ပစ္စည်းတွေ ဒီဘက် ပစ်လိုက်ပါလားဟင်.. ဟို..ဖြူဖြူလေးတော့ အပါဘူးနော်…ဟိဟိ…
ဟယ် ဂမုန်းပွင့်က ကံစမ်းမဲပေးနေပါလား…
တုန် … ထုံ ကာရံတော့ကိုက်ပါတယ်ဗျ မတုန်တုန်ရဲ့။ ဖတ်ပြီး အားရပါးရ ရီသွားပါတယ်ဗျာ။ သဘောကျလွန်း လို့ပါ :-) ။ ကျွန်တော်သာဆိုလို့ကတော့ နောက်ထပ် သုံးသောင်းဖိုးထပ်ဝယ် လိုက်ပြီး ထပ်ကိုနိုက်လိုက်မှာ (အဟေး အချွန်နဲ့မတယ်လဲမပြောနဲ့အုန်း)
မှန်း … ဘာတွေဝယ်လာလဲလို့ စာဖတ်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မှ “မိုးသောက်ချိန်” ပြောတဲ့ ညက်မှန် ကြီးလဲပါသကိုးဗျ :-)
အော်…. ဒါကြောင့်ဒီနေ့သတင်းကြားလိုက်ဒယ် .. ဘာဒဲ့
ဖိနပ်ရော အကျီ င်္ရော ဝမ်းဆက်တစုံ အဖတ်တင်သွားတာပေါ့ ညီမရယ် ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး ညစာလွတ်အုန်းမယ် ဆို မန်းလေးတက်ခဲ့လေ တနပ်တလေကတော့ အမကျွေးနိုင်ပါတယ်ကွယ်
သေချာ ပြူးပြဲ ကြည့်ရင်း ဝင်ဖတ်သွားပါတယ် ဒေါ်အိဒုံးးးး
ဒါနဲ့ ကုန်သွားတဲ့ သုံးသောင်းကျော်နဲ့ဆို..
အေးဆေး အဝှာသောက်ပြုလို့ ရသဗျာ..
ခင်ဗျား ဒေါ်အိတုန်းဆီက နေလုံမျက်မှန်ငှားထားတာ ပြန်မပေးရသေးဘူးထင်တယ်…
မနှစ်က ညည်းကံစမ်းမဲအကြောင်းရေးပြီးငါ ကလဲ ကံစမ်းမဲအကြောင်းရေးလိုက်သေးတယ်။
အဲဒီပိုစ်က ဒီတစ်ပါတ် မြနန္ဒာဂျာနယ်က ပုံနှိပ်လိုက်တယ်အေ့.
အစမ်းမဲနှိုက်ဖို့ လုပ်ခဲ့တာ ဖတ်ပြီး ရီလို့ မဆုံးဘူး။
ရီတာနော်။ အလှောင်ဘူး။ ဟားဟား။
ပစ္စည်း ၅မျိုး (ငါးသေတ္တာ အပါအဝင်) ကို သုံးသောင်း။
ဒီတော့ တစ်မျိုးကို ပျမ်းမျှ ၆၀၀ဝ ကျပ်။
ဒါထက် ခြောက်ထောင် တန် ငါးသေတ္တာ ကြီး ကို မစားဘဲ ပြတိုက်မှာ ထားတော့မယ်လား။
ဟုတ်ဘူး . ရွာသူားတွေ စာပေဆု ဘူဖေးမှာအိထုံ စပွန်ဆာ အနေနဲ့ ဖောက်ကျွေးမှာ ဆိုလား …
ပြုံးရင်း ဖတ်သွားပါတယ်… :-] ….မနက်စာ၊ညစာ ငတ်သွားလည်း ၃သောင်း မပြည့်
ပြည့်aအာင်ဝယ်မယ်ဆိုပြီး အားတက်သရော အဝတ်တွေပြုံးပြုံးလေးရွေးနေတဲ့ပုံကို
ဪ..နောက်ပြီး ဝယ်လာတာတွေ အိမ်ရောက်မှ မကြိုက်တော့ဘူးဖြစ်သွားရင်
အပ်စပ်တဲ့သူကို အရင်းအတိုင်း သို့ လျှော့ဈေးနဲ့ ပြန်ရောင်းပစ်လိုက်ပါလို့….
အဲ့ဒါ ငွေပြန်ဖန်နည်း..သို့(-) အမျက်တော်ဖြေလျော့နည်း…
(-) ထဲမှာ ဖေဖေ၊မေမေ၊ချစ်သူ၊ချစ်ချစ်၊ကိုကို၊မောင်၊darling,sweetheart,honey၊
ငါးသေတ္တာကို၆၀၀ဝနဲ့ဝယ်စားတာကွ ဘာမှတ်နေလဲ :p
မနှစ်ကလည်း လှည်းတန်းစိန်ဂေဟာမှာ သိုက်ဆွေးဖိနပ်နဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်
ခုလည်း ကံစမ်းမဲ အားကိုးလိုက်တာ …..
အင်းပေါ ့လေ ….မဟာကံထူးရှင်မဟုတ်ပေမဲ့ စူဠကံထူးရှင်အဖြစ် ငါးသေတ္တာလေးနဲ ့ဆိုတော့……
ဒါနဲ့ …ကျုပ်သားက ငါးသေတ္တာဆိုသိပ်ကြိုက်….
ဖတ်ပြီး comment ပေးသွားတဲ့ ရွာသူားများ အားလုံးကိုရော ၊ အသံတိတ်ဖတ်သွားတဲ့ စာဖတ်သူများ အားလုံးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …. ။ အားလည်း နာပါတယ် … အဟီး … ဒီရက်ပိုင်း သစ်ရွက်လှုပ်တာတောင် ရယ်ချင်တဲ့စိတ်မျိုး ဖြစ်နေတာကြောင့် အခုလို ရူးကြောင်ကြောင်တွေပဲ ရေးမိနေပါတယ် …. ။ ဂယ်ဘာ .. ဂယ်ဘာ .. နည်းနည်းလေး ပေါမိတာပါ .. အကြံဖန်လုပ်တာ မဟုတ်ရပါဘူး … ။ ဟီးးးး :harr:
မှားဒါချိယင် တောင်းပံပါလယ်နော် .. ခွိခွိ ။
Red Link ဂျီး expire ဖြစ်သွားလို့ တစ်ပတ်လောက် ရွာထဲမရောက်လိုက်ဘူး…
စိတ်ကောက်နေတဲ့အမေ့ကို I Love u လို့ပြောလိုက်လေ… :harr:
နောက်ထပ်ကံစမ်းလို့ ငါးသေတ္တာပဲပေါက်ရင် ညစာပျောက်မှာမပူနဲ့တော့
အရင်တုန်းက ရွာသူတစ်ယောက်တင်ဖူးတဲ့ ဆန်းဝစ်လုပ်နည်းလေးကူးသွားလိုက်ပါကွယ်။
နောက်တစ်ခါ မဲနှိုက်ရင် ဆေးထိုးအပ်နဲ့ဖလားကိုင်တဲ့လူရဲ့ နားထင်ကိုထောက်ပြီး တန်ဘိုးကြီးဆုံး မဲလိပ်ပေးပါလို့ခြိမ်းခြောက်ပြီး နှိုက်
အီးတုံးကနေ အခုတော့ အီးထုံ ဖစ်တွားတာပေါ့… :harr:
ပြီးခဲ့နဲ ့နှစ်ပတ်လောက်က စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ မြေနီကုန်း ဂမုန်းပွင့်ကိုရောက်ရင်း အိမ်ကမှာလိုက်တာလေး တွေဝယ်လိုက်တော့ 2သောင်းကျော်လောက် ထွက်သွားတယ်။ ပိုက်ပိုက်ရှင်းတဲ့အချိန်မှာ ငွေရှင်းတဲ့ ကောင်မလေးက အစ်မဝယ်တာ 2သောင်းဖိုးကျော်နေပြီ သုံးသောင်း ဖိုးပြည့်အောင်ဝယ်လိုက်တဲ့ ကံစမ်းမဲရှိတယ်တဲ့။ ဈေးဝယ်ဖို ့သွားလို ့ရှိရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပစ္စည်း ဘယ်မှာရှိ တယ်ဆိုတာကိုသိရင် ကျွန်မက ဟိုဒီသိပ် မငမ်းဖြစ်ဘဲ ဝယ်မဲ့ပစ္စည်းရှိရာတန်းသွားတော့ စနေ၊ တနင်္ဂနွေမှာ ကျပ်သုံးသောင်းဖိုး ပြည့်အောင်ဝယ်ရင် ဗလာမပါကံစမ်းမဲဆိုတာကို ဗီနိုင်းကြီးနဲ့ပထမထပ်မှာရေးထားတာ ကို ကျွန်မက မမြင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့ ငွေရှင်းကောင်တာက ကောင်မလေးက အဲလိုပြောတာလဲကြားရော ကျွန်မလည်း သုံးသောင်းဖိုး ပြည့်အောင် အားထုတ်တော့တာပေါ့။ စာအုပ်ဝယ်စရာရှိတာနဲ့ဝယ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးသွားတော့၊ ကျွန်မအဖို ့ကံကောင်းတယ်ဘဲပြောရမလား လိုချင်တဲ့ စာအုပ်ကကုန်နေတယ်။ စာအုပ်ဆိုင် အထွက်ဘက်မှာက ကံစမ်းမဲနှိုက်ရတဲ့နေရာဆိုတော့ ကျွန်မတချက် လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ တွေ ့လိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေက အိတုံပေါက်တဲ့ ငါးသေတ္တာ၊ ကလေးရေဗူး၊ စသော စသော ပလပ်စတစ် ထွေလီကာလီတွေအများကြီး တင်ထားတာကိုတွေ ့ပြီး သကာလ ကျွန်မလဲ စိတ်ပျက်စွာနဲ ့စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်ပြီး နောက်ထပ်မဝယ်ဖို ့ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဆုံးမပြီး အိမ်ကိုပဲပြန်လာလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လို့အဲဒီနေရာမှာ ရေခဲသေတ္တာ၊ စမတ်ဖုန်းတို ့၊ အဝတ်လျှော်စက်တို ့တွေ ့ရင်တော့ ကျွန်မလဲ သုံးသောင်းဖိုးပြည့်အောင် အားထုတ်ပြီး ကံစမ်းမိမှာ အမှန်ပါပဲ။ ဆင်ခြင်တော်မူကြပါကုန်……….
လိမ်ဆင်ကြီးပေါ့ နော်…အဲဒီငါးသေတာတော့ ကြိုက်ပါတယ် ပေါက်ရတာ အတောခက်တယ်
မေ့မေ့ နဲ.အေ ညည်းကိုက အမှတ်မရှိ…. ဟိုတခါ ဆီလီကွန်တုန်းကလဲ တစ်ခါ ဒီတစ်ခါ ဒါကြီး က ပါလာပြန်ပီ… အမလေးနော်….
ပြီးတော့ ဟို မျက်မှန်ကြီးက ချိုင်းနားမိတ်ကြီး…. ဖိနပ်ကလဲ အရောင်မွဲမွဲနဲ.အေ… သုံးသောင်း နှမြောထာ…
သများတို.ဆို သုံးသောင် A , B , C အစီအစဉ် သုံးခုဆွဲသွားလို.ရတယ်… :hee: :hee:
မေ့မေ့တားယေး ချစ်ချာယေး ရေဆင်းချိုးယေး …. နာကော့မန့် မရေးတော့ဘူး တွေးထားတာ … မရေးရေးအောင် လာဆွတယ် … :chee:
အဲ့ဒီ ဆီလီကွန် … မျက်နှာ အပြောင်ကောင်းလို့ …… ရွာထဲက တစ်ယောက်က ပရိုက်ဗိတ်ချက်ကနေ လာမေးတယ်တော့ …. မနည်းရှင်းပြလိုက်ရသေးတယ် … ဒီအဆင်နဲ့ .. ဒီအဆင်အေဆီလီကွန်စရာလားအေ … မုန်းထှာ … ဟွန့် :eee:
လင်းတယေး … ဒီ ညက်ညန်က နာ့ယောက်မကို I love u လုပ်ဖို့ ဝယ်ရာဒါဟဲ့ …. ။ အသံတေးအသံဂျောင်နဲ့ တီလုပ်လို့ ထအော်ရသလားဟဲ့ .. တီလုပ်ပေမယ့် ပေါပေါလောလော တီလုပ်မဟုတ်ဘူး ။တော်ကြာ သူဝင်ဖတ်ရင်း တီလုပ်ပေးပါတယ်ဖြစ်နေဦးမယ် ။ ဟီးဟီး …. :harr:
ဖီနပ်က နာ့ဟာ ၊ အရောင်မွဲပေမယ့် လူကပုတော့လည်း ဒေါက်ခုရတယ်ပေါ့ဟာ ခွိခွိ ။
ကျနော် ကတော့ မြေနီကုန်း ဂမုန်းပွင့်မှာ ဦးဂျမ်း ပုဆိုး မာစရွိက် နှစ်ထည် ဝယ်ထားတဲ့ နယ်က အစ်ကို တယောက် ရဲ့ voucher နဲ့ Victor table fan တစ်ခု ပေါက်ဖူးတယ် ဗျ။ ကြာပြီ ၂၀၀၁-၂ လောက်က ၂ထည် ကို သုံးထောင် တောင် မပြည့် ဘူး။ ၁၅ရက် တခါ ဖွင့် ပေးတဲ့ ကံစမ်းမဲ မှာ ရတာ။ နယ်က အကို ကို အကြောင်း ကြားတော့ တောမှာ သုံးရမှာ အဆင် မပြေလို့ မင်းပဲ သုံး ဆိုလို့ ရတာ။
( ဘယ်ရမလဲ ကိုယ်တိုင်ပေါက်တာ မဟုတ်ပဲ ကြွားပစ် လိုက် တယ်။ )
မနေ့က လကုန်ရက်မအားလို့ ရွာထဲကို ပို့စ်တစ်ခုပဲ ဖတ်ပြီး ကော်မန့်တစ်ခုပဲပေးလိုက်ရတယ် … ဂနေမှ ဝင်ဖတ်တာ င့ါချွေးမ ကောင်းကောင်းဖြုန်းထားပါလား …… တော်သေးတာပေ့ါအေ … ညည်းက (၃) သောင်းဖိုးဝယ်ပြီး ငါးသေတ္တာလေးပေါက်သေးတယ် … ကျုပ်မှာတော့ Junction Zawana က (၃) သောင်းဖိုးဝယ်ရင် တိုက်ခန်း သိန်း (၄၀၀) တန် ကံစမ်းမွဲ ဖောက်မယ်ဆိုလို့ ကလေးနို့မှုန့် (၁) သောင်းခွဲကျော်ကျော်တင်မက Diaper တွေကို (၁) သောင်းခွဲဖိုးမပြည့်ပြည့်အောင်ဝယ်ပြီး ကံစမ်းလိုက်တာ ဘာမှကိုမပေါက်ပါဘူးအေ …. တနင်္လာနေ့က ဂမုန်းပွင့်ရှေ့ကဖြတ်တော့ Discount ကိုမဝယ်လိုက်ရလေခြင်းဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာ တော်သေးတယ် မဝယ်ဖြစ်တာ …. Discount ပစ္စည်းတွေဝယ်ရင် သတိတော့ထားနော် ရိရိရွဲရွဲတွေရတတ်တယ် …. ကိုယ်ဝတ်လိုက်မှ ချိပ်ပြုတ်တာတို့ … ဖိနပ်ကလူကြားထဲ ခွာထွက်တာတို့ ဘောင်းဘီက ခွပြဲတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်အေ့ …….
မာမီခိုင်ကလည်း … ပိန်းတယ်အေ့ … 17% ဒစ်စကောင့်ပေးတာက … အဝတ်ထည်နဲ့ အသုံးဆောင် အကုန်လုံးပေါ်မှာပေးတာပါတော် …. ။ နာ့ယောက္ခမ အတော်လေး ခေတ်နဲ့ ပြတ်ကျန်ခဲ့တာကိုး ….. ပုံထဲမြင်တာ ရိရိရွဲရွဲပဲ သူမြင်တယ် .. အဲ့လာ တမင်ဖြဲထားတဲ့ အပေါက်တွေ ယောက္ခမရဲ့ … တမီးတို့လို အရွယ်လေးတွေပဲ ဝတ်လို့ ရတယ် … ယောက္ခမတို့လို အတက်ကြီး ဘတ်နေဒဲ့ လူဒွေ ဝတ်မရတော့ … ဒွတ်ခပဲ ။ :harr:
ချွေးမလေး … သီတင်းကျွတ်နီးပီသိလား ……
စကားအတင်းစပ် ချွေးမလေးဝယ်ထားတဲ့ ဖိနပ်ပုံစံ မာမီကြိုက်တယ် ….
ဟို အဖြူရောင်လေးကိုလည်း မာမီနဲ့အဆင်ပြေမယ့်ပုံပဲ ဘာလို့လဲဆိုရင် မာမီတို့က မရှိကို အရှိလုပ်ရမှာလေ ……..
သေချာတာတစ်ခုပြောရရင်တော့ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်အိတ်ထဲကနေ အပိုထွက်တဲ့ကိစ္စမလုပ်တာပါဘဲ။
အဲတော့ ကံစမ်းမဲ ပါတယ်ဆိုတာကို စဝယ်လိုက်က တည်းက ကိုယ့်ထဲက အရင်စပါသွားပြီဆိုတာကို
ဇာတ်လမ်း စ/ဆုံး ဖတ်မိပီး သကာလ
ဒီနှမ အတွက်လဲ စိတ်ရင်း ဝမ်းနည်း ဖြစ်မိပါကြောင်း …
ဆက်ရှည်ရင် လှောင်တယ် ဖြစ်အုံးမယ်….
မှန်းချက်နဲ့ နှမ်းထွက် မကိုက်ဘူး ဖစ်တွားဒါပေါ့နော် …
ကံစမ်းမဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ အကျန်လေးတစ်ခုဒေါ့ဖြင့် ပေးချင်ပါတယ် ..
နောက်ခါ ကံစမ်းမဲ မနှိုက်ခင်မှာ
ဒေဝစက္ကု အတတ်ပညာကို အရင်ကျင့်ပြီးမှ နှိုက်ဘာလို့ …
Ma Ehtone ရယ်… :harr: အဲနီးအိုင်တမ်ဝယ်လို့ရတာပဲ..မုန့်ပုံးတွေဘာတွေဝယ်ပြီး ရွာထဲကသက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုကန်တော့ပေါ့.. စကားမစပ်…အန်တီက ဆာဒင်းကြိုက်တယ်ကွဲ့
အိတုံကနေ ငထုံဘွဲကိုပြောင်းသွားတဲ့ ညီမရေ..
အားမငယ်နဲ့ မနိုလဲ တနင်္လာနေ့က အလှပြင်ဆိုင်မှာ ထိလာပါတယ်ရှင်
ဒီတစ်ခါ ထမင်းခွံ့ကြွေးရင် ငါးသေတ္တာဗူး မဖောက်တတ်လို့ ဆိုပြီး…
ဟယ်…… တွား ကျိုး သွားဘီ!
ဟဲ့ တုံစိန်မ ညည်းမလဲအေ ဝယ်ယူတဲ့ပစ္စည်းထဲမှာ အမတ်ကြီးဖို့ မျက်မှန်ကြီးတလက်လဲပါသေးသကိုးဟ….. ငါးသေတ္တာကြီးကံစမ်းမဲပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ ရွာသူားတွေကို မုန့်ဝယ်ကျွေးသင့်တာပေါ့အေ ဟားဟား
ဟဲ့ …. မဲတူမ … တို့ကြား မှာ သွေး မခွဲပါနဲ့ …. ။
တို့ တိုမတ်ကို … ညက်ညန်တော့ မပေးဘူးအေ …. အာပွားပဲပေးမှာ .. ခွိခွိ ။ Birthday Kiss ပြောပါတယ် .. ခွိခွိ …. :harr:
ဒီတသက် … တိုမတ်ကြီး ဘူပိတ်စေသတည်း …. ဟီးးးးးးးးးးးးးး